what, when, why: Multiple सर्च ईन्जिन "nowGoogle" ट्राई गर्ने कि ?
Multiple सर्च ईन्जिन "nowGoogle" ट्राई गर्ने कि ?
"nowGoogle" नाम सुन्नु भएको छ ? जहाँ सम्म धेरैलाई यसको बारे थाहा छैन होला । "nowGoogle" एउटा multiple सर्च ईन्जिन हो जसबाट एकै चोटि १० वटा सर्च ईन्जिनको काम गर्न सकिन्छ । एकै चोटि १० वटा सर्च ईन्जिनको काम गर्ने भएकोले यसको प्रयोग गरेर तपाईंले आफ्नो बहुमुल्य समयको बचत गर्न सक्ने निस्चित नै छ । "nowGoogle" बाट सर्च गर्न मिल्ने सर्च ईन्जिनहरुमा Google, Yahoo, Bing, Ask, AllTheWeb, AOL, Lycos, Dogpile, AltaVista र Clusty हुन । यो साईटको साधारण डिजाईनले गर्दा चलाऊन निकै सजिलो पनि छ । तपाईंहरु पनि एक चोटि ट्राइ गरेर हेर्ने कि ?
यो साईटमा जानको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला
मैले kyamazza टाईप गरेर सर्च गरेर हेरें WoW... !!! मेरो ब्लग त "nowGoogle" मा भएका सबै सर्च ईन्जिनहरुमा listed भई सकेको रहेछ ।
sir namaskar tapaile junsukai internetsansar ma hepani mero lagi kehi complain 6e na suvakamana kayamazza lai.
Ambika Paudel said...
thank you very much sir but i try to see my blog but not suscrible so have any idea please share me below blow
sir dherai dhanyabad tapai ko important informationko lai but mero web ma ta multiple search engine la kam nai garena if you have any idea please share me below blog ok